Ny pejy mandoko voay dia misintona sy manonta maimaimpoana
Eto amin'ity pejy ity ianao dia hahita pejy maro fandokoana momba ny loha-voay, izay azonao atao pirinty miaraka amin'ny zanakao ary lokoko crayons, penina na crayons savoka.
Pejy fandokoana voay
Ny pejinay fandokoana dia nalaina araka izay azo atao mba hanomezana fahalalahana mamorona araka izay azo atao ny zazavavy sy ny zazalahy. Etsy ankilany, manome lanja ny fisehoan'ny biby ihany koa izahay. Miorina amin'izany dia nanandrana nanao ny voay ho mahatsikaiky toa ny sariitatra izahay, fa mba hanolotra modely izay hahafantaran'ny olona ny habeny sy ny loza mety hitrangan'ireo biby mandady ireo. Ny tsindry iray amin'ilay rohy dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:​
Mamba eo amoron'ny renirano